Accueil > Gazetin'ny nosy > Fandravana: Mitohy ny famonoana olona ataon’ny fanjakana
Fandravana: Mitohy ny famonoana olona ataon’ny fanjakana
Tamin’ny faran’ny herinandro teo dia nisavoritaka izay tsy izy ny olona teny amin’ny fokontany Ankasina-67 Ha iny. Nilaza fa tsy hanaiky ny fandravana trano miisa 200 mahery izay hataon’ny fanjakana eo amin’iny toerana iny izy ireo na inona na inona hitranga. Hananganana fotodrafitrasa vaovao indray eto amin’ity toerana hono ka tsy maintsy ravana ny tranon’ny olona manakaiky izany toerana izany. Olona mahatratra 2000 mahery no voakasik’izao raharaha izao ary efa nampiseho ny tsy fahafaliany izy ireo. Efa nifamory izy ireo noho ny amin’izany satria famonoan’olona tanteraka mihitsy no andraisany izany. Efa miparitaka ao amin’ity fokontany ity ny taratasy milaza ny fanesorana ireo olona voakasika izany. Tantara mitohy ity ka ho hitantsika ny tohiny.
Tsy ny ao Ankasina ihany no azon’ny fandravana trano fa ny ao Andohatapenaka ihany koa. Trano miisa 150 any hoany koa no tsy maintsy horavana. Misy olona roa no milaza fa tompon’ireo tany ireo ka samy manambara ny fananany taratasy avy any amin’ny fitsarana momba izany. Ny vahoaka indray milaza fa efa maherin’ny telopolo taona no nipetrahany teny ary nanajariany ny tany ary mbola tanimpanjakana tamin’izany fotoana izany. Ny iray milaza ho tompon’ny tany dia voalaza fa mpisolo vava amin’ny fitsarana mihitsy. Nisy ny fanakanana nataon’ny mponina ny raharaha ity tany amin’ny fitsarana nefa dia izao voalazan’izy ireo fa ho tonga izao ny fandravana ny tranon’izy ireo na tsy mbola nivaly aza izany.
Tsy io ihany no fandravana trano sy fanesorana olona amin’ny tranony. Tetsy Tsiadana dia fianakaviana miisa telo no noroahin’ny polisy niaraka tamin’ny vadin-tany. Tsy nisy alaharo intsony fa dia niala tsy misy hatakandro ireto olona ireto. Navoaka ny trano ny entana ary natao tamin’ny fomba feno habibiana hoy ireo voakasika izany. maro ny entana very noho izany.
Mbola tamin’ny faran’ny herinandro iny koa dia voaroaka teo Anosy ny mpivarotra fiarakodia efa niasa avy any an-dafy. Maro dia maro izy ireo ka nanao filaharana tetsy Anosy koa ho fanoherana izany.
Heverin’ny vahoaka ho famonoana olona no ataon’ny fanjakana amin’izany satria zaza ambehivavy ary be antitra voakasikin’ny fanesorana amin’ny trano. Nilaza izy ireo fa fampitomboana ny olona handeha hipetraka eny La Réunion-Kely sy ny amoron’ny làlam-by izao atao ny fanjakana izao. Ny andro fahavaratra, ny orana mikija ary ny fepetra araka ny lalàna hoy izy ireo tsy voahaja. Misy mihitsy aza ireo mponina ireo no manao farateny amin’ny fitondrana HVM(hery vaovao hoan’i Madagasikara” mihitsy. Hatramin’izao dia tsy misy fandraisana andraikitra ataon’ny fanjakana hoy ihany ireto olona ireto fa toa mampirisika koa aza no ataon’izy ireo. Fanjakana mpanjakazaka sy mpamono olona no filazan’ireo olona voakasika ireto izao raharaha izao. Maro ny resaka mandeha amin’ireo fandroahana olona sy fandravana trano teto Antananarivo sy ny manodidina izay nandritry ny fotoana nitondran’ingahy Hery Rajaonarimampianina. Lasan’ny olom-bitsy izay manambolo fa indrindra fa ny karana sy ny sinoa ireny tanin’ny vahoaka ireny ankehitriny.